Dare repamusorosoro munyika reConstitutional Court, nhasi rambosendeka mutongo waro panyaya yakakumbirwa nevagari vekuChilonga verudzi rwechiShangani yekuti ribvise mutemo unopa hurumende masimba ekuvabvisa muminda yavakasiirwa nemadzitateguru avo unoti ivhu rosemunyika nderehurumende , Godfrey Mtimba, anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro reConcourt, Justice Paddington Garwe vange vachibatsirwa naJustice Bharat Patel vanzwa nyaya iyi vakasendeka mutongo parutivi pakupera kwedare vachiti vachazizivisa magweta evagari ava zuva rekutura mutongo.
Vagari vekuChilonga varikuda kubviswa pamisha yemadziteteguru avo kuti kambani yeDendiary irime bundo remombe dzemukaka rinonzi Lucern . Vagari vanopfuura zviruru gumi ndivo vari kuda kutamiswa.
Vagari ava vari kumiririrwa nemagetwa eZimbabwe Laywers for Human Rights achitungamirirwa naVaTendai Biti vakaisa chikumbiro mudare rekupedzisira renyika kuti mutemo unopa hurumende masimba ekuvadzinga panzvombo dzemadziteteguru avo urashe uye vazopihwe mapepa ekuti vave varidzi veminda neivhu ravo.
VaBiti vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yanzwikwa nhasi muConcourt kuHarare uye vamirira kuudzwa zuva richaturwa mutongo wasendekwa parutivi uyu.
Vamwe vavagari vari kuda kutamiswa vakaita saVaLivingtone Chikati, vanoti vanotarisira kuti mutongo uchabudiswa naVaGarwe uchange uri kudivi ravo kuti vachengetedze ivhu remadzinza avo.